Ogwe oge nke ego ego Forex - FOREXFUNDS.COM
Ị nọ ebe a: Home / Ego Forex / Ogwe oge nke ego ego Forex
Ogwe oge nke ego ego Forex
August 5, 2018 by iwuchukwu Ahapụ a Comment
Etinye ego na Forex bụ nkọwa ma na-echekarị na-agbanwe agbanwe. Tụkwasị na nke a, ọbụlagodi ndị ahịa ọkachamara na-aga nke ọma na-enwe oge nloghachi ma ọ bụ ọbụna nkwụsị. N'ihi ya, oge azụmaahịa ndị ahụ ga-efunahụ mfu. Onye ọchụnta ego maara ihe ga-anọgidesi ike na atụmatụ itinye ego ya ma ghara imechi akaụntụ ahụ ngwa ngwa iji kwe ka akaụntụ ahụ gbakee site na ọnwụ na-adịru nwa oge n'hara nhatanha. Ọ gaghị abụ atụmatụ amamihe dị na ya iji mepee akaụntụ ị na-ezubeghị ịkwado maka opekata mpe ọnwa isii ma ọ bụ ọnwa.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Ego Forex, Investment Tagged With: ijide oge, investors